C/weli Gaas “Waxaa u sheegeynaa Shabaab marka dagaalada ku ceeboobaan inay..” – Bulshoweyn.com | Your Source Of News And Entertainment
C/weli Gaas “Waxaa u sheegeynaa Shabaab marka dagaalada ku ceeboobaan inay..”
Madaxweynaha maamulka Puntland C/weli Maxamed Cali Gaas ayaa ka tacsiyadeeyay geeridii gudoomiyihii haweenka gobolka Mudug Dhudi Yuusuf Aadan, isagoo ku eedeeyay Al-shabaab marka looga soo adkaado dagaalada inay dib ugu soo laabtaan birimigeydada oo ay dilaan.
C/weli Gaas ayaa fariin u diray Al-shabaab, waxaana uu tilmaamay in xabsiyada deegaanada Puntland ay ka buuxaan maxaabiis Shabaab ah.
“Waxaa u sheegeynaa Shabaab marka dagaalada ku ceeboobaan inay dib ugu soo laabtaan birimigeydada oo ay dilaan, waxaa u dirayaa baaq Al-shabaab, xabsiyadeena ayay ka buuxaan, markaad shan dishaan anagana 20 ayaa dileynaa, waan heynaa”Ayuu yiri Madaxweynaha maamulka Puntland C/weli Maxamed Cali Gaas.
Inkastoo aanay jirin koox sheegatay dilkii Dhudi Yuusuf, ayaa hadana loo arkaa hadalkiisa mid jawaab u noqon kara, oo ay ugu aar-gudayaan.
maamulka Puntland ayaa xabsiyadeeda waxaa ku jira maxaabiis Al-shabaab ah oo lagu qabtay dagaaladii bishii Maarso ka dhacay deegaano ka tirsan Puntland, markii dagaalyahano ka tirsan Al-shabaab ay doonyo ku gaareen xeebaha Puntland.
Dhinaca kale, dadka odorasa siyaasada ayaa aaminsan in hadalka madaxweynaha Puntland C/weli Gaas uu jawaab u noqon karo dilkii Dhudi Yuusuf oo aanay wali koox sheegan, hase ahaatee waxaa horay u jiray in Puntland dil toogasho ku fulisay xubno lagu soo eedeeyay inay ka tirsan yihiin Al-shabaab.